You're Hired - အပိုင်း (၉) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on January 9, 2012 at 11:17 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
Visit http://learnenglish.britishcouncil.org/en/youre-hired/episode-9 for video, vocabulary activity, tapescript and language tasks for this episode.
(အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကို လက်မခံမီ စာချုပ်ပါကဏ္ဍအချို့နှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဆာရာက မာစီယာနှင့်တွေ့ဆုံသည်။)
Marcia Boardman : Hi! Welcome to WebWare.
(ဟိုင်း! WebWare မှကြိုဆိုပါတယ်။)
Sarah Timms : Thanks, nice to see you again.
(ကျေးဇူးပါပဲ၊ ပြန်တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။)
Marcia Boardman : You too. So, you said you wanted to come in and haveachat before you started …
(ရှင့်ကိုရောပဲ။ အလုပ်မ၀င်ခင် လာပြီးဆွေးနွေးချင်တယ်ဆို…)
Sarah Timms : Yeah, I just wanted to havealook around and askafew more questions, if I can …
(ဟုတ်ပါတယ်။ နည်းနည်းလောက် လှည့်ပတ်ကြည့်ပြီး မေးခွန်းမေးခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင် နည်းနည်းလောက် ထပ်မေးချင်ပါသေးတယ်…)
Marcia Boardman : Sure, fire away!
Sarah Timms : Well, I was delighted to receive the job offer …
(အင်း .. အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ရလို့ ကျွန်မ ၀မ်းသာနေတာ…)
Marcia Boardman : Good – we were delighted to offer it to you …
(ကောင်းတာပေါ့ - ကျွန်မတို့ကလည်း ရှင့်ကိုကမ်းလှမ်းရတာကို ၀မ်းသာမိပါတယ်…)
Sarah Timms : But before I sign the contract there were one or two specifics I wanted to talk about.
(ဒါပေမယ့် စာချုပ်မှာလက်မှတ်မထိုးခင်တော့ အကြောင်းအရာ တစ်ခုနှစ်ခုလောက်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးချင်လို့ပါ။)
Marcia Boardman : OK … ’specifics’?
(ကောင်းပြီ … အကြောင်းအရာဆိုတာက?)
Sarah Timms : Well … there isapay scale, instead ofafixed salary …
(အင်း … နှုန်းသေလစာအစား လုပ်ခနှုန်းထားအဆင့်ဆင့်ရှိတယ် …)
Marcia Boardman : Yes, asanew employee you’d be at the lower end of pay scale. (ဟုတ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းအသစ်အနေနဲ့ လုပ်ခနည်းနည်းကနေ စမှာဖြစ်ပါတယ်။)
Sarah Timms : But taking my experience into account …
(ဒါပေမယ့် ကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်…)
Marcia Boardman : Well, you haven’t had that much experience – we see you as an investment…
(အင်း ရှင်မှာ ဒီလောက်အတွေ့အကြုံမရှိလှပါဘူး - ရှင့်ကို ကျွန်မတို့က ရင်နှီးမြှုတ်နှံမှုတစ်ခုလို့ပဲ သတ်မှတ်ပါတယ်။)
Sarah Timms : But that salary would only bealittle more than I’m making now. So instead of asking forahigher level on the pay scale, I thought this could be compensated by adding certain bonuses – for instance if I make certain sales targets, or even break them, I would be looking foragood cash payment, or stock options in the company.
(ဒါပေမယ့်အခုရမယ့်လုပ်ခက ကျွန်မလက်ရှိရနေတဲ့လုပ်ခထက် နည်းနည်းပဲပိုမှာ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ လုပ်ခစကေးမြင့်မြင့်တောင်းဆိုမယ့်အစား အပိုဆုကြေးပေးပြီး နည်းနည်းထေပေးလို့ရမလား - ဥပမာဆိုရင် သတ်မှတ်ထားတဲ့ အရောင်းအားကို ပြည့်မီနိုင်မယ် ဒါမှမဟုတ် ကျော်လွန်အောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် ငွေသားအပိုဆု ဒါမှမဟုတ် ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ရာ ရရှိနိုင်မှုတို့ကို မျှော်လင့်ပါတယ်။)
Marcia Boardman : Well, that is something we sometimes offer senior member of staff, but to show good faith I’ll provisionally offer you the bonus scheme – but I’ll have to okay it with Philip first.
(အင်း - ဒါကတော့ ၀ါရင့်ဝန်ထမ်းတွေကို တစ်ခါတစ်ရံပေးလေ့ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကုမ္ပဏီရဲ့ စိတ်ကောင်းစေတနာကို ဖော်ပြတဲ့အနေနဲ့ ရှင့်ကို အပိုဆုပေးမယ့်အစီအစဉ်ကို လိုအပ်ရင်ပံ့ပိုးပေးမယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖိလစ်ဆီက သဘောတူညီချက်တောင်းရဦးမယ်။)
Sarah Timms : That’s fine. I also see there are 25 days holidays.
(ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ပိတ်ရက် ၂၅ ရက်ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။)
Marcia Boardman : Yes. That’s standard.
(ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။)
Sarah Timms : It’s not very much forahigh pressure job though …
(ဒါပေမယ့်လည်း ဖိအားများတဲ့အလုပ်အတွက်တော့ များတယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး…)
Marcia Boardman : I can’t offer you any more holiday.
(ကျွန်မအနေနဲ့ကတော့ ဒီထက်ပိုပြီး ပိတ်ရက်မပေးနိုင်ပါဘူး။)
Sarah Timms : No, but I was wondering if we could delay my start date, so instead of startingaweek from now, as we discussed, I could start inamonth’s time?
(မပေးပါနဲ့၊ ဒါပေမယ့် ကျွန်မစဉ်းစားထားတာက ကျွန်မအလုပ်စ၀င်မယ့်ရက်ကို နောက်ဆုတ်လို့ ရမလားလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်း ဒီနေ့ကစပြီးနောက်တစ်ပါတ်မှာ အလုပ်စ၀င်မယ့်အစား တစ်လကြာမှအလုပ်စ၀င်လို့ ရနိုင်မလား?)
Marcia Boardman : You’reatough negotiator, Sarah!
(ရှင်က တင်းကျပ်တဲ့အပေးအယူလုပ်သူပဲ ဆာရာ!)
Sarah Timms : That’s one of the reasons you hired me!
(ကျွန်မကို ရှင်တို့အလုပ်ခန့်တဲ့အထဲမှာ အဲဒီအချက်လဲ တစ်ချက်အပါအ၀င်ပဲလေ!)
Marcia Boardman : Yes, of course. OK, I think we can do that – I’ll look forward to seeing you inamonth and earning those bonuses!
(သေချာတာပေါ့။ ကောင်းပြီလေ ကျွန်မတို့အဲဒီလို လုပ်ပေးနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။ နောက်တစ်လကြာရင်ရှင့်ကို ဒီအပိုဆုတွေရယူတာကို စောင့်စားနေမယ်နော်!)
Permalink Reply by K. T. Hsint on January 10, 2012 at 12:47
Permalink Reply by 1rnupmiprgh6y on January 15, 2012 at 15:38
သေသေချာချာ လေ.လာထားတာပဲ ကျေးဇူးပါ သူငယ်ချင်း
Permalink Reply by 1lq3mh546srhv on March 6, 2012 at 22:03
Permalink Reply by Master Learner on April 12, 2012 at 12:00
Permalink Reply by CHIT THU on July 10, 2012 at 17:02
It is very interesting and I am very interested in studying to the series of You're Hired.
Thank you so much for every presentation.